Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
Kitaabka Quduuska macnihiisu waa ‘Kitaabka’. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ahaa qoraalkii ugu horreeyey taariikhda ee laga dhigo foomka buugga oo aan maanta aragno. Kitaabka Quduuska… Read More »Waa maxay farriinta Kitaabka – Buugga?
Marka la gaaro waqtigii la soomi lahaa bisha Ramadaan waxaan maqlaa saaxiibaday oo ka doodaya sida ugu wanaagsan ee loo soomi karo. Dooddu waxay ku… Read More »Bisha barakeysan ee Ramadaan – Sidee loo soomaa?
Surah Al-Masad (Surah 111-Palm Fiber) waxay ka digaysaa Xukunka Dabka maalinta ugu dambaysa. Waxaa khasaaray Gacmihii Abuulahab, halaagmayna.Waxna uma tarin Xoolihiisii iyo wuxuu kasbadayna.Wuxuuna gali… Read More »Maalinta: Al-Masad & Al-Xadiid iyo Masiixa
Surah Al-Qaryaah (Surah 101-bahalnimada) waxay ku tilmaamaysaa Maalinta Qiyaame ee soo socota sidan: Qaarica maxay tahay.Mase taqaannaa Qaarico.Waa Maalinta Dadku noqon sida Baalallay.Buuruhuna ay noqon… Read More »Maalinta: Al-Qariah & At-Takathur iyo Masiixa